वैद्य र थापा एकतामा आए पार्टी फुट्नु पर्छ भन्नेहरु नांगिएर जान्छन् : अग्निप्रसाद सापकोटा, पोलिटब्यूरो सदस्य,एमाओवादी
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकताका लागि ७ बुँदेको जवाफमा वैद्य समूहले ६ बुँदै जवाफ फर्काएको छ । वैद्य समूहले संस्थापनले आत्मालोचनसम्म गर्नुपर्ने सर्तअघि सारेको छ । के अध्यक्षले आत्मालोचना गर्लान ? ती र यस्तै विषयमा केन्द्रीत रहेर संस्थापनका पोलिटब्यूरो अग्निप्रसाद सापकोटासँग ओएनएसका लागि लोकेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश : माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकताका लागि ७ बुँदेको जवाफमा वैद्य समूहले ६ बुँदै जवाफ फर्काएको छ । वैद्य समूहले संस्थापनले आत्मालोचनसम्म गर्नुपर्ने सर्तअघि सारेको छ । के अध्यक्षले आत्मालोचना गर्लान ? ती र यस्तै विषयमा केन्द्रीत रहेर संस्थापनका पोलिटब्यूरो अग्निप्रसाद सापकोटासँग ओएनएसका लागि लोकेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :
पार्टीको विवाद चरम विन्दुमा छ, विवाद कता जाँदैछ ? विवादलाई मिलाउने कोशिस हुँदैछ । वैद्यजीहरुले पनि आफ्ना कुराहरु लेखेर पठाउनु भएको छ । ती कुरामा अध्ययन हुँदैछ । विवादका बीचबाटै विवादको समाधान गरेर पार्टीलाई एकता गर्नका लागि तीब्र पहल भैरहेको छ ।
अध्यक्ष दाहालको जवाफमा वैद्य समूहले आत्मालोचना गर्नेसम्मको कुरा आएको छ । के अध्यक्ष आत्मालोचना गर्न तयार हो ? अध्यक्षले आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट रुपमा भन्नु भएको छकी अहिलेसम्म भएका कामको समीक्षा गरौं । त्यो समीक्षाबाट निस्कने निष्कर्षबाट निस्कने गल्ती, कमजोरी स्विर्कान तयार छु । त्यती मात्रै होइन केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गम्भीर छलफल गरौं । छलफलबाट अध्यक्ष त्याग्ने अवस्था आए म अध्यक्ष पनि त्याग्न तयार रहेको अध्यक्षले भनि रहनु भएको छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प तयार भए प्रधानमन्त्रीबाट बाबुरामजीले राजीनामा दिने भन्ने कुरा लिखित रुपमा दिनुभएकै छ । छलफल गरौं त हामीहरुले भन्दै आएका छौं । वैद्यजीहरुको राष्ट्रिय भेल हुँदैछ, त्यसबाट पनि एकताको प्रस्ताव पारित गरौं र यी यी बुँदामा एकताको सर्त हुन सक्छ भन्ने त्यसपछि हाम्रो विस्तारित बैठकमा पनि एकतावद्ध हुनको लागि एउटा प्रस्ताव पारित गर्ने । त्यसपछि दुवै प्रस्तावमा गम्भीर छलफल एकता गर्न सकिन्छ । त्यस दिशातिर पहल भैरहेको छ । ७ बुँदेमा खास कुरा नै छैन । त्यसबाट एकता हुँदैन भन्दैहुनुहुन्छ ? हामी समीक्षा गर्नु नै ठूलो कुरा हो । हिजो पार्टी र सरकारबाट भएका निर्णयमा कहाँ कहाँ कमजोरी भए जस्तो पिप्पा सम्झौंता, सेना समायोजना, जग्गा फिर्तासँगै पार्टीबाट भएका सबै विषयमा समीक्षा गर्न तयार रहेका छौं । कमीकमजोरीसँगै अन्त्यमा अध्यक्षले राजीनामा दिनसम्म भएपछि त्यो भन्दा गम्भीर के हुन सक्छ ? तपाईले मिल्ने सम्भावना कत्तिको देख्नु भएको छ ? अमिलुन्जेल मिल्छ जस्तो लाग्दैन । फेरि आ-आफ्ना कुरा खुलस्त राखी र मिलन विन्दु नै खोज्ने हो । मलाई के लाग्छ भने हामीबीच विचारमा कार्यदिशामा, रणनीतिमा, कार्यनीतिमा खासै फरक छैन । पछिल्लो गतिविधिमा लाइनप्रति कति प्रतिवद्ध हो भन्ने देखिन्छ । आयोग बनाएर संविधान जारी गर्ने राष्ट्रपतिलाई यो सरकार बर्खात उत्प्रेरणा गर्ने र घोर भन्दा घोर दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रियावादीसँग सहजै गठबन्ध गर्न तयार भएकाले थोरै आशंका देखिन्छ । तरपनि विचार फरक नभएका एकता नै नहुने भन्ने अवस्था नभएको होइन । सबैलाई हेरर वैद्यजीहरुले क्रान्ति नै चाँहेको भए एकतावद्ध भन्दा अर्का विकल्प छैन । वैद्यले एकता गरौं भन्दा पनि अब एकता हुन नसक्ने र पार्टी फुट्ने अवस्थामा पुगेको हो र ? वैद्यजीहरु दृढतापूर्वक अहिलेको आवश्यकता पार्टी एकता नै हो भनी लाग्नु भयो । त्यो कुनै समस्या नै हैन । सबैले एकताको माग गरिरहेका छन् । राजनीति मिली सकेपछि सबै कुरा मिल्छ । जसले नियतै राखेर फुट्नु पर्छ भन्ने गरेका छन्, तिनीहरु नागेरै जान्छन् । त्यसैले वैद्य र बदलजीहरु एकताको पक्षमा उभिए सबै कुरा मिल्छ । Comments
• पार्टीले विश्वास गर्छ भने प्रचण्डसँग लड्न तयार छु : गगन थापा